Isi nke State na Canada
Isi nke steeti na Canada bụ eze ma ọ bụ Queen nke Canada, ugbu a, Queen Elizabeth II. Tupu ya, isi ala Canada bụ nna ya, Eze George VI. Achịchị Gọọmenti nke Canada na-egosipụta ike Queen dị ka onyeisi oche ma e wezụga mgbe Queen nọ Canada . Onye gọọmenti n'ozuzu, dịka eze ma ọ bụ Queen, na-anọ n'èzí ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka ọrụ isi nke steeti na Canada bụ nnukwu ememme.
A na-ewere gọọmentị ndị isi na ndị gọvanọ ndị nnọchianya anya, ya mere, ndị isi ala na-emegide isi nke gọọmentị, ma ọ bụ praịm minista Canada .
Ihe Onye Isi nke Ọchịchị Na-eme
N'adịghị ka isi nke steeti na usoro ntụrụndụ dị ka US, a na-ewere Queen nke Canada dị ka onye nnọchiteanya nke steeti kama inwe ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-arụsi ọrụ ike. N'ikwu okwu n'ụzọ nkịtị, Queen anaghị "eme" dịka ọ na-eje ozi ihe atụ, na-anọpụ iche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Dị ka ụkpụrụ Canada si kwuo, gọvanọ n'ozuzu (na-arụ ọrụ na nnọchiteanya nke Queen) nwere ibu ọrụ dịgasị iche iche dị mkpa site na ịdenye ego nile n'ime iwu ịkpọ ntuli aka n'ịwepụta prọfesọ a họpụtara ahọpụta na ụlọ ọrụ ya. N'ikwu eziokwu, gọvanọ n'ozuzu na-arụ ọrụ ndị a n'ụzọ ihe atụ dị ka ọ na-emekarị nkwenye eze ya nye iwu ọ bụla, ọkwa, na ndụmọdụ nke praịm minista.
Ma, onyeisi oche nke Canada nwere ikike ọchịchị nke a maara dị ka mberede "ikike nchekwa ikike," nke kewapụrụ isi nke ala na isi nke gọọmentị iji hụ na arụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ọchịchị gọọmenti Canada. Na omume, ike ndị a anaghị adịkarị mfe.
Mgbe ndị ụkọchukwu, ndị omebe iwu, ndị uweojii, ndị ọrụ ọha na eze na ndị agha, na-akwado Nwanyị, ọ naghị achị ha.
A na-enye akwụkwọ ikike Canada "n'aha nke Queen." Nke bụ isi na-egosi na ọ bụ isi obodo na-egosi na ọ bụ ikike ya iji nyefee nkwenye site na ikpe na ịgbaghara mmehie n'ihu ma ọ bụ mgbe a gbasịrị ikpe.
Isi nke Canada nke isi ugbu a, Queen Elizabeth II
Elizabeth II, Queen Queen of United Kingdom, Canada, Australia, na New Zealand na 1952, bụ "eze kachasị aka na-achị achị oge ochie nke Canada." Ọ bụ Isi nke Commonwealth na ọ bụ eze nke mba iri 12 ndị nweere onwe ha n'oge ọ na-achị, ọ na-abanye n'ocheeze n'ọnọdụ nna ya, bụ Eze George VI. N'afọ 2015, ọ karịrị nne ochie ya, Queen Victoria, dị ka eze Britain na-achị n'ogologo oge na eze nwanyị na-achị n'ogologo oge. nke ala na akụkọ ihe mere eme.
T4 Slips na ndị ọzọ Canada Income Tax Slips
Iwu Canada na-achọ ọrụ mkpuchi ọrụ
Ụbọchị nke nhoputa ndi ochichi Ontario
Agha Obodo Amerịka: Agha Shaịlo
Ọsọ na Nne na Nna na Toni Morrison 'Ụtọ'
Idozi okwu na okwu ọnụego iji kwupụta echiche
William Quantrill, Jesse James, na Centralia Massacre
Agha Obodo Amerịka: Nke mbụ
Egwuregwu Ndị Gymnastics 2012 nke Olympic: The Fierce Five
10 Mmeghachi omume na-egbuke egbuke
Petronilla: Mụta Banyere Sibling nke Eleanor nke Aquitaine
Tedd Petruna na AirTran Flight 297 site na Atlanta ruo Houston
Ole ndị bụ isi bodhisattvas?
Nnukwu Ụlọ Akwụkwọ Mahadum Nkwụsịtụ
Egwu Top 100 nke Christmas maka 2017
Iji igwe ojii mee ihe na Ihu Ihuigwe
Kedu ihe dị iche iche gbasara obodo ndị dị na Galapagos?
Gọọmentị Nchekwa Rugby dị oké mkpa
Kedu ka m ga-esi gbanye na C?
Gettysburg Na-agbakọta: Ezigbo Ihe Na-alụ Agha Ndị Agha Obodo
"Ụda na Dumber" Movie Quotes
Mahadum Furman University GPA, SAT na ACT Data
Ụlọ akwụkwọ Claremont
Gịnị bụ agbụrụ Tiger Woods? Ọ na-ekwu na ọ bụ 'Cablinasian'
Egwuregwu na Ladder
Mụta otu Egwuregwu Kọmputa Kọmputa maka Ịntanetị
5 Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Creative Ọ bụla Ụlọ Ndị Kwesịrị Ekwesịrị Kwesịrị Inwe
Akụkọ nke Na-agbaso Ụmụ nwanyị Monet n'Obi